ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အမိုက်ဆုံး LOTTE Hotel မှာစားရမယ့် US$7ကျပ်တန် Salad Buffet
26 Mar 2018 . 6:15 PM
ချစ်တဲ့ အခရာ ပရိသတ်တို့ရေ။ ရန်ကုန်က Hotel ကြီးတော်တော်များများက ပင်လယ်စာတွေ၊ ညစာတွေ Buffet မျိုးစုံ ဈေးမျိုးစုံနဲ့ သရေကျလောက်အောင် ဆွဲဆောင်တည်ခင်း ဧည့်ခံနေကြချိန် ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလှဆုံး အင်းလျားကန်ဖျားပေါ် မေးတင်ဆောက်ထားတဲ့ LOTTE Hotel ကြီးကတော့ ဦးဦးဖျားဖျား နေ့လည်စာ Salad Buffet ကို တခါမှ မကြားဖူးတဲ့ US$7ကျပ်နဲ့ စွန့်စွန့်စားစား တည်ခင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ အခရာအဖွဲ့သားတွေက ဘာပြောကောင်းမလဲ ဦးဦးဖျားဖျားပြေးပြီးတော့ကို မြည်းစမ်းသတင်းပေးလိုက်ပါပြီလို့။
LOTTE ရဲ့ ခမ်းနားမှုကတော့ တော်တော်များများ မြင်ပြီးသားမို့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ ကိုယ်ကတော့ LOTTE က ဒီ Promotion ကြီး Facebook မှာ တက်လာတည်းက7ကျပ်ဆိုတာကို တအံ့တသြ ဖြစ်သွားတာ။ Salad Buffet ဆိုတော့ Salad ကို စိတ်သိပ်မဝင်စားပေမယ့် Buffet ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလားလို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ ဟိုတယ်ထဲက La Seine Restaurant ကို Booking ချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Booking ချိတ်တာရော၊ ရောက်သွားတဲ့ အခါ နေရာချပေးတာရော Reception က ဝန်ထမ်းညီမလေးတွေ စိတ်ရှည်တယ်။
ကိုယ်ကရောက်တာနဲ့ ကန်ဖျားဘက်ခြမ်း လင်းတဲ့နေရာရွေးယူလိုက်တယ်။ နေရာထိုင်ခင်းကတော့ အကျယ်ကြီးပါပဲ။ မျက်နှာကျက်တွေ သိပ်လှတယ်။ အလယ်ဗဟိုမှာ လေးထောင့်တန်းကြီး တစ်တန်းစာပဲ ၄ ဖက် ၄ လံ ခင်းကျင်းထားတယ်။ Open Kitchen Open Serve Type ပဲ။ စားဖိုမှုးတွေ ဆက်တိုက် Sushi တွေလိပ်တယ်။ Pizza တွေဖုတ်တယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တည်ခင်းတဲ့အရသာပါ။
အစားအစာတွေအနေနဲ့ဆို Salad Buffet ဆိုတော့ Salad က စပြောရမယ်။ Salad တစ်ပွဲအတွက် လိုအပ်တဲ့ အသီး၊ အရွက်၊ Sauce၊ Dressing တော်တော်စုံတယ်။ သူနဲ့တွဲစားဖို့ ဝက်သားလွှာနဲ့ ဝက်ဆလာမီ အလွှာ ၂မျိုးတွဲချပေးထားတယ်။ ဒါက ပထမဆုံးမြင်ရမယ့် အသားပဲ။ Salad ဆိုတာမျိုးက ဗမာလျှာနဲ့ သိပ်မကိုက်ပေမယ့် ဝက်ဆလာမီလေးလေး လေးရယ်၊ ဝက်သားလွှာရယ်၊ သံလွင်သီးလေး၊ သံလွင်dressing လေးနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ့်အကြိုက် မွှေနှောက်သုပ်စားလိုက်တော့လည်း ခံတွင်းရှင်း အရသာရှိသား။ Salad Buffet ဆိုတော့လည်း မစားမဖြစ်စားခဲ့ရမှာပဲမို့ သွားစားရင်တော့ ကြိုက်သလိုစပ်ပြီး အရသာရှိရှိ တပွဲလောက်တော့ စားခဲ့ကြနော်။
သူ့ဘေးမှာ မှိုနုနုလေးတွေ အိဖတ်နေအောင်သုပ်ထားတဲ့ဟင်းပွဲရယ်၊ မုန်လာဥနီသုပ်ရယ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်လို အာတီချုပ်သီးသုပ်ရယ် ရှိတယ်။ La Seine Restaurant ကို တစ်ခုအကြံပေးချင်တာက ဒီ Buffet က Local Market အတွက်လား Foreigner Market အတွက်လား သေချာလေးကွဲဖို့ပါ။ Salad ထိ စားတတ်ပေမယ့် အဲ့မုန်လာဥနီသုပ်နဲ့ အာတီချုပ်သုပ်ကတော့ မြန်မာတွေအကြိုက်မတွေ့မယ့် အသုပ်မျိုးပါ။ အဲ့အစား အသားလေးနဲ့ အသီးရွက် မျှမျှတတအရသာရှိရှိအသုပ်လေးတွေ ထည့်ပေးရင် ပိုပြေမလားလို့ပေါ့နော်။ ကိုယ်တော့ မကြိုက်၊ မစားတတ်။ ရောက်လို့ မြည်းကြည့်ချင်လည်း တစ်ဖတ်ဆီလောက်ပဲ အရင်ထည့်မြည်းကြည့်ကြနော်။ ကြိုက်မှ ထပ်ယူနော်။
သူ့ဘေးက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လိပ်တဲ့ ဆူရှီလေးတွေ။ ၂မျိုး ပဲရှိပါတယ်။ စိတ်ချ ဒါလည်း အသားလုံးဝ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စားလို့ကောင်းတယ်။ ချို၊ အေး၊ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နှမ်းဆီနံ့ မွှေးမွှေးလေး။ သူလည်း ချက်ချင်းလိပ်၊ ချက်ချင်းစားမို့ ကုန်သွားရင်တော့ စောင့်ရပါတယ်။
ကဲ နောက်တစ်ဖက်သွားရရင် ပထမဆုံးမြင်ရမှာ Sausage နဲ့ Broccoli အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင်ရယ် မုန်လာဥနီရယ် ရောကြော်ထားတာလေး ခြောက်ခြောက်လေး။ ကိုယ်ဖြင့် ပျော်လိုက်တာ သူ့ချည်းစားလို့ရတဲ့ အသားတွေ့ပြီဆိုပြီးလေ။ သူ့ဘေးက အာလူးကို မွှေးမွှေးလေး Bake လုပ်ထားတာ။ အရသာလေး မဆိုးဘူး။
သူတို့ဘေးမှာက Pizza Pizza။ Pizza ဘေးက ခေါက်ဆွဲကြော်။ ဒီ Salad Buffet အတွက်တော့ ဒီ ၂ ခုနဲ့တင် အမုန်းဆွဲပြီး ပိုက်ဆံရှင်းရင်တောင် ပေးပျော်နေပြီ။ Pizza က Thin Crispy Type ဘက်သွားတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပူပူနွေးနွေးဖုတ်ပေးတာမို့ ကောင်းတာပြောရရင် အရသာတကယ် ရှိတယ်။ မကောင်းတာ ပြောရရင် ကုန်သွားမှ ပြန်ဖုတ်ပေးလို့ စောင့်ရတယ်။ သူ့ကိုလည်း အသားတွေမမျှော်လင့်ပါနဲ့ ဒါပေမယ့် ဘာမှမပါတာတောင် Pizza Taste အပြည့်ရတယ်။
ခေါက်ဆွဲကြော်က လတ်တလောခေတ်စားနေတာမျိုးဆို တော်တော်များများထင်ကြတာက တောကြိုက်အစားအစာပေါ့။ အီတယ် ခေါက်ဆွဲလုံးတုတ်ကြီးတွေ အနှစ်တွေနဲ့ အီဆိမ့်နေတာမျိုးပေါ့။ ဒီခေါက်ဆွဲကြော်ကတော့ မြို့ကြိုက်ဗျ။ ဝက်သားဘေကွန်လေးတွေနဲ့ ခေါက်ဆွဲသားလေး အိအိချောချောလေး နူးညံ့တယ်။ တော်တော်အရသာရှိတယ်။ ပါးစပ်ထဲ လျှောလျှောရှုရှုရှင်းရှင်းလေး။ ဒီရောက်ရင် နိုင်ငံခြားသားအများဆုံးထိတာ Salad၊ မြန်မာအများစုထိတာ ခေါက်ဆွဲကြော်ပဲ။ ကဲ…လူကြီးမင်းတို့ရော တောသားလား မြို့သားလား? 😅
သူ့ဘေးမှာ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ထမင်းရယ်၊ ကိုရီးယား ကင်ချီ ၃ မျိုးရယ် ရှိတယ်။ ကဲ မြန်မာကြိုက်အတွက်တော့ ဒါအကုန်ပဲ။ နောက်ထပ် ဘိုစာစားချင်တဲ့ လူကြီးမင်းများအတွက်တော့ ပေါင်မုန့်မျိုးစုံရယ်၊ ချောကလက်ယို၊ ဘယ်ရီသီးအနှစ်ယိုတွေ ခင်းကျင်းထားတယ်။
အချိုပွဲ အတွက်တော့ နာနတ်သီးနဲ့ နဂါးမောက်သီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ နာနတ်သီးလေးကို လှလှလေး တုံးထားတယ်။ အားလုံးပြောရရင် အစားအသောက်အတွက်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
မပြေတာပြောရရင်7ကျပ်တည်းနဲ့ ခင်းကျင်းထားလို့ Drinks လုံးဝမရပါတဲ့။ ရေပဲ အဝတိုက်ပါတယ်။ အမှန်တော့ Orange Juice လေးတစ်ခွက်လောက်ဖြစ်ဖြစ် ထပ်ထည့်ရင်တောင် ဘယ်လောက်မှ ထပ်ကုန်ကျစရာမရှိတာကို Salad တွေစား၊ အအီအဆိမ့်တွေစားပြီး ရေပဲသောက်ပြန်ရမယ့်အဖြစ်ပါ။ ဒါတော့ စားသုံးသူဘက်ကနေ သေချာအကြံပြုပေးခဲ့တယ်ဗျို့။ အအေးတခုခုလောက် တည်ခင်းပေးဖို့ပါ။
နောက်တချက်ဆို ဝန်ထမ်းလေးတွေကို ပိုနွေးထွေးစေချင်ပါတယ်။ တာဝန်ကျေတာမျိုးလောက်ပဲ ခံစားရတယ်။ နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံတာပါလို့ ရင်ဘတ်ထဲ မရောက်လာဘူး။ Reception က ညီမလေးတွေကတော့ နွေးထွေးပါတယ်။ လူများရင် ဖုန်းလက်ခံတာများလာရင်လည်း ဒီတိုင်းလေး နွေးထွေးပေး၊ စိတ်ရှည်ပေးကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
ဈေးနှုန်းအတွက်တော့ ကျေနပ်စရာပါ။ 7+++ ဆိုတဲ့နေရာမှာ7ကျပ်ရယ် Service Tax 0.7 ကျပ်နဲ့ Government Tax 0.39 ကျပ်အပါအဝင် US$ 8 ကျပ်တည်းပါ။ +++ တွေမကြောက်သွားပါနဲ့။ မြန်မာငွေဆို ၁၁၃၂၆ ကျပ်ပါပဲ။
အားလုံးခြုံငုံပြောရရင် Salad Buffet ဆိုပေမယ့် မြန်မာတွေပါ စားလို့ရအောင် ၂ဖက်အဆင်ပြေမယ့် အစားအသောက်တည်ခင်းမှုပုံစံမျိုးဆိုတော့ စားပျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာ အများကြီးမရှိပါဘူး။ Diet လုပ်ချင်သူတွေ၊ နေ့လည်စာ ကျန်းကျန်းမာမာစားချင်သူတွေအတွက်တော့ သွားကို သွားသင့်ပါတယ်။
အသားများများ မျှော်လင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ရိုးရိုး Buffet,Hot Pot ဆိုင်တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး။ Item တွေအများကြီး၊ Set တွေအများကြီး မရှိပါဘူး။ တစ်ကယ့်ကို အဲ့ပမာဏပါပဲ။
Starter ကို Salad လေးစား၊ Main Course ကို ခေါက်ဆွဲကြော်၊ Pizza ၊ Sushi Roll တွေစား၊ Dessert ကို အချိုပွဲလေး ပေါင်မုန့်ချောကလက်သုတ်လေးနဲ့ ပိတ် စလည်ဆုံး ညီညွတ်နေရော။ အသားတွေတော့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ တကယ်မပါသလောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် အဆင့်တန်းမြင့်မြင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညီစားရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ LOTTE လို နေရာကြီးမှာမလား။ ဒီလောက်ကတော့ ပေးထိုက်ပါတယ်။ ပုံမှန် တခြား Hotel Buffet တွေမှာလည်း ဒီထဲက အားလုံးနီးပါးပါပေမယ့် ဒါလေးကျ ဈေးလေးချိုပြီး လူတိုင်းစားနိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ အဆာပြေ ဝဝလင်လင်စားနိုင်မှာဆိုတော့ တန်တယ်ဆိုတာထက် အဆင်ပြေတဲ့ Buffet လို့ သုံးနှုန်းချင်ပါတယ်။
တန်လားဆို တန်ပါတယ်။ အမျိုးအစား အများကြီး စားရမှာလားဆို စားပွဲပေါ်မှာရှိတာ အကုန်ပါပဲ။ လုံးဝ အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ Item တွေက မကြာခဏ ပုံမှန်အပြောင်းလဲရှိတဲ့ပုံပါပဲ။ ဂျင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြေငြာထားသလောက်အကုန်ပါပါတယ်။
အမျိုးတို့ရေ သွားရင် ဓါတ်ဖမ်းလို့လှတဲ့ ဝတ်စုံလှလှလေးဝတ်သွား၊ ကန်ဖျားဘက်က နေရာလှလှလင်းလင်းလေးမှာထိုင်၊ ကုန်သလောက်ယူစား ခနခနယူစား ပြီးရင် Hotel ထဲဝင် ဓါတ်လှလှလေးဖမ်းခဲ့နော့။ ကဲ…အခရာတော့ ကိုယ့်အစားချစ်သူတွေအတွက် အရင်သွားစား၊ အရင်တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။
သူက နေ့တိုင်း တနင်္ဂနွေကလွဲပြီး နေ့ခင်း ၁၁ ခွဲကနေ ၂ ခွဲထိရှိပါတယ်တဲ့။ Hotel Buffet တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်း +9519351000 ကို ကြိုလေးတော့ ချိတ်ဦးနော်။ ဒီလ ၂၈ တစ်ရက်တော့ ပွဲလုပ်ဖို့ ကြိုယူထားပြီးပြီမို့ မရလောက်တော့ပါဘူးတဲ့။ ကျန်ရက်တွေ နေ့တိုင်းရှိသေးတယ်တဲ့နော်။ ကဲ…သွားလိုက်ကြစို့ဗျား။
ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အမိုကျဆုံး LOTTE Hotel မှာစားရမယျ့ US$7ကပျြတနျ Salad Buffet
ခဈြတဲ့ အခရာ ပရိသတျတို့ရေ။ ရနျကုနျက Hotel ကွီးတျောတျောမြားမြားက ပငျလယျစာတှေ၊ ညစာတှေ Buffet မြိုးစုံ ဈေးမြိုးစုံနဲ့ သရကေလြောကျအောငျ ဆှဲဆောငျတညျခငျး ဧညျ့ခံနကွေခြိနျ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အလှဆုံး အငျးလြားကနျဖြားပျေါ မေးတငျဆောကျထားတဲ့ LOTTE Hotel ကွီးကတော့ ဦးဦးဖြားဖြား နလေ့ညျစာ Salad Buffet ကို တခါမှ မကွားဖူးတဲ့ US$7ကပျြနဲ့ စှနျ့စှနျ့စားစား တညျခငျးလိုကျပွီဆိုတော့ အခရာအဖှဲ့သားတှကေ ဘာပွောကောငျးမလဲ ဦးဦးဖြားဖြားပွေးပွီးတော့ကို မွညျးစမျးသတငျးပေးလိုကျပါပွီလို့။
LOTTE ရဲ့ ခမျးနားမှုကတော့ တျောတျောမြားမြား မွငျပွီးသားမို့ ပွောစရာမလိုတော့ဘူးနျော။ ကိုယျကတော့ LOTTE က ဒီ Promotion ကွီး Facebook မှာ တကျလာတညျးက7ကပျြဆိုတာကို တအံ့တသွ ဖွဈသှားတာ။ Salad Buffet ဆိုတော့ Salad ကို စိတျသိပျမဝငျစားပမေယျ့ Buffet ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလားလို့ စိတျဝငျစားတာနဲ့ ဟိုတယျထဲက La Seine Restaurant ကို Booking ခြိတျလိုကျတယျပေါ့နျော။ Booking ခြိတျတာရော၊ ရောကျသှားတဲ့ အခါ နရောခပြေးတာရော Reception က ဝနျထမျးညီမလေးတှေ စိတျရှညျတယျ။
ကိုယျကရောကျတာနဲ့ ကနျဖြားဘကျခွမျး လငျးတဲ့နရောရှေးယူလိုကျတယျ။ နရောထိုငျခငျးကတော့ အကယျြကွီးပါပဲ။ မကျြနှာကကျြတှေ သိပျလှတယျ။ အလယျဗဟိုမှာ လေးထောငျ့တနျးကွီး တဈတနျးစာပဲ ၄ ဖကျ ၄ လံ ခငျးကငျြးထားတယျ။ Open Kitchen Open Serve Type ပဲ။ စားဖိုမှုးတှေ ဆကျတိုကျ Sushi တှလေိပျတယျ။ Pizza တှဖေုတျတယျ။ လတျလတျဆတျဆတျ တညျခငျးတဲ့အရသာပါ။
အစားအစာတှအေနနေဲ့ဆို Salad Buffet ဆိုတော့ Salad က စပွောရမယျ။ Salad တဈပှဲအတှကျ လိုအပျတဲ့ အသီး၊ အရှကျ၊ Sauce၊ Dressing တျောတျောစုံတယျ။ သူနဲ့တှဲစားဖို့ ဝကျသားလှာနဲ့ ဝကျဆလာမီ အလှာ ၂မြိုးတှဲခပြေးထားတယျ။ ဒါက ပထမဆုံးမွငျရမယျ့ အသားပဲ။ Salad ဆိုတာမြိုးက ဗမာလြှာနဲ့ သိပျမကိုကျပမေယျ့ ဝကျဆလာမီလေးလေး လေးရယျ၊ ဝကျသားလှာရယျ၊ သံလှငျသီးလေး၊ သံလှငျdressing လေးနဲ့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ကိုယျ့အကွိုကျ မှနှေောကျသုပျစားလိုကျတော့လညျး ခံတှငျးရှငျး အရသာရှိသား။ Salad Buffet ဆိုတော့လညျး မစားမဖွဈစားခဲ့ရမှာပဲမို့ သှားစားရငျတော့ ကွိုကျသလိုစပျပွီး အရသာရှိရှိ တပှဲလောကျတော့ စားခဲ့ကွနျော။
သူ့ဘေးမှာ မှိုနုနုလေးတှေ အိဖတျနအေောငျသုပျထားတဲ့ဟငျးပှဲရယျ၊ မုနျလာဥနီသုပျရယျ၊ ဂျေါဖီထုပျလို အာတီခြုပျသီးသုပျရယျ ရှိတယျ။ La Seine Restaurant ကို တဈခုအကွံပေးခငျြတာက ဒီ Buffet က Local Market အတှကျလား Foreigner Market အတှကျလား သခြောလေးကှဲဖို့ပါ။ Salad ထိ စားတတျပမေယျ့ အဲ့မုနျလာဥနီသုပျနဲ့ အာတီခြုပျသုပျကတော့ မွနျမာတှအေကွိုကျမတှမေ့ယျ့ အသုပျမြိုးပါ။ အဲ့အစား အသားလေးနဲ့ အသီးရှကျ မြှမြှတတအရသာရှိရှိအသုပျလေးတှေ ထညျ့ပေးရငျ ပိုပွမေလားလို့ပေါ့နျော။ ကိုယျတော့ မကွိုကျ၊ မစားတတျ။ ရောကျလို့ မွညျးကွညျ့ခငျြလညျး တဈဖတျဆီလောကျပဲ အရငျထညျ့မွညျးကွညျ့ကွနျော။ ကွိုကျမှ ထပျယူနျော။
သူ့ဘေးက လတျလတျဆတျဆတျလိပျတဲ့ ဆူရှီလေးတှေ။ ၂မြိုး ပဲရှိပါတယျ။ စိတျခြ ဒါလညျး အသားလုံးဝ မပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ စားလို့ကောငျးတယျ။ ခြို၊ အေး၊ လတျလတျဆတျဆတျ နှမျးဆီနံ့ မှေးမှေးလေး။ သူလညျး ခကျြခငျြးလိပျ၊ ခကျြခငျြးစားမို့ ကုနျသှားရငျတော့ စောငျ့ရပါတယျ။
ကဲ နောကျတဈဖကျသှားရရငျ ပထမဆုံးမွငျရမှာ Sausage နဲ့ Broccoli အစိမျးရောငျ၊ အဖွူရောငျရယျ မုနျလာဥနီရယျ ရောကွျောထားတာလေး ခွောကျခွောကျလေး။ ကိုယျဖွငျ့ ပြျောလိုကျတာ သူ့ခညျြးစားလို့ရတဲ့ အသားတှပွေီ့ဆိုပွီးလေ။ သူ့ဘေးက အာလူးကို မှေးမှေးလေး Bake လုပျထားတာ။ အရသာလေး မဆိုးဘူး။
သူတို့ဘေးမှာက Pizza Pizza။ Pizza ဘေးက ခေါကျဆှဲကွျော။ ဒီ Salad Buffet အတှကျတော့ ဒီ ၂ ခုနဲ့တငျ အမုနျးဆှဲပွီး ပိုကျဆံရှငျးရငျတောငျ ပေးပြျောနပွေီ။ Pizza က Thin Crispy Type ဘကျသှားတယျ။ လတျလတျဆတျဆတျ ပူပူနှေးနှေးဖုတျပေးတာမို့ ကောငျးတာပွောရရငျ အရသာတကယျ ရှိတယျ။ မကောငျးတာ ပွောရရငျ ကုနျသှားမှ ပွနျဖုတျပေးလို့ စောငျ့ရတယျ။ သူ့ကိုလညျး အသားတှမေမြှျောလငျ့ပါနဲ့ ဒါပမေယျ့ ဘာမှမပါတာတောငျ Pizza Taste အပွညျ့ရတယျ။
ခေါကျဆှဲကွျောက လတျတလောခတျေစားနတောမြိုးဆို တျောတျောမြားမြားထငျကွတာက တောကွိုကျအစားအစာပေါ့။ အီတယျ ခေါကျဆှဲလုံးတုတျကွီးတှေ အနှဈတှနေဲ့ အီဆိမျ့နတောမြိုးပေါ့။ ဒီခေါကျဆှဲကွျောကတော့ မွို့ကွိုကျဗြ။ ဝကျသားဘကှေနျလေးတှနေဲ့ ခေါကျဆှဲသားလေး အိအိခြောခြောလေး နူးညံ့တယျ။ တျောတျောအရသာရှိတယျ။ ပါးစပျထဲ လြှောလြှောရှုရှုရှငျးရှငျးလေး။ ဒီရောကျရငျ နိုငျငံခွားသားအမြားဆုံးထိတာ Salad၊ မွနျမာအမြားစုထိတာ ခေါကျဆှဲကွျောပဲ။ ကဲ…လူကွီးမငျးတို့ရော တောသားလား မွို့သားလား? 😅
သူ့ဘေးမှာ ထမငျးပေါငျးအိုးနဲ့ ထမငျးရယျ၊ ကိုရီးယား ကငျခြီ ၃ မြိုးရယျ ရှိတယျ။ ကဲ မွနျမာကွိုကျအတှကျတော့ ဒါအကုနျပဲ။ နောကျထပျ ဘိုစာစားခငျြတဲ့ လူကွီးမငျးမြားအတှကျတော့ ပေါငျမုနျ့မြိုးစုံရယျ၊ ခြောကလကျယို၊ ဘယျရီသီးအနှဈယိုတှေ ခငျးကငျြးထားတယျ။
အခြိုပှဲ အတှကျတော့ နာနတျသီးနဲ့ နဂါးမောကျသီး ၂ မြိုးရှိပါတယျ။ နာနတျသီးလေးကို လှလှလေး တုံးထားတယျ။ အားလုံးပွောရရငျ အစားအသောကျအတှကျတော့ ဒီလောကျပါပဲ။
မပွတောပွောရရငျ7ကပျြတညျးနဲ့ ခငျးကငျြးထားလို့ Drinks လုံးဝမရပါတဲ့။ ရပေဲ အဝတိုကျပါတယျ။ အမှနျတော့ Orange Juice လေးတဈခှကျလောကျဖွဈဖွဈ ထပျထညျ့ရငျတောငျ ဘယျလောကျမှ ထပျကုနျကစြရာမရှိတာကို Salad တှစေား၊ အအီအဆိမျ့တှစေားပွီး ရပေဲသောကျပွနျရမယျ့အဖွဈပါ။ ဒါတော့ စားသုံးသူဘကျကနေ သခြောအကွံပွုပေးခဲ့တယျဗြို့။ အအေးတခုခုလောကျ တညျခငျးပေးဖို့ပါ။
နောကျတခကျြဆို ဝနျထမျးလေးတှကေို ပိုနှေးထှေးစခေငျြပါတယျ။ တာဝနျကတြောမြိုးလောကျပဲ ခံစားရတယျ။ နှေးနှေးထှေးထှေး ဆကျဆံတာပါလို့ ရငျဘတျထဲ မရောကျလာဘူး။ Reception က ညီမလေးတှကေတော့ နှေးထှေးပါတယျ။ လူမြားရငျ ဖုနျးလကျခံတာမြားလာရငျလညျး ဒီတိုငျးလေး နှေးထှေးပေး၊ စိတျရှညျပေးကွဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျနျော။
ဈေးနှုနျးအတှကျတော့ ကနြေပျစရာပါ။ 7+++ ဆိုတဲ့နရောမှာ7ကပျြရယျ Service Tax 0.7 ကပျြနဲ့ Government Tax 0.39 ကပျြအပါအဝငျ US$ 8 ကပျြတညျးပါ။ +++ တှမေကွောကျသှားပါနဲ့။ မွနျမာငှဆေို ၁၁၃၂၆ ကပျြပါပဲ။
အားလုံးခွုံငုံပွောရရငျ Salad Buffet ဆိုပမေယျ့ မွနျမာတှပေါ စားလို့ရအောငျ ၂ဖကျအဆငျပွမေယျ့ အစားအသောကျတညျခငျးမှုပုံစံမြိုးဆိုတော့ စားပြျောတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရှေးခယျြစရာ အမြားကွီးမရှိပါဘူး။ Diet လုပျခငျြသူတှေ၊ နလေ့ညျစာ ကနျြးကနျြးမာမာစားခငျြသူတှအေတှကျတော့ သှားကို သှားသငျ့ပါတယျ။
အသားမြားမြား မြှျောလငျ့နတေဲ့သူတှအေတှကျတော့ ရိုးရိုး Buffet,Hot Pot ဆိုငျတှလေိုမဟုတျပါဘူး။ Item တှအေမြားကွီး၊ Set တှအေမြားကွီး မရှိပါဘူး။ တဈကယျ့ကို အဲ့ပမာဏပါပဲ။
Starter ကို Salad လေးစား၊ Main Course ကို ခေါကျဆှဲကွျော၊ Pizza ၊ Sushi Roll တှစေား၊ Dessert ကို အခြိုပှဲလေး ပေါငျမုနျ့ခြောကလကျသုတျလေးနဲ့ ပိတျ စလညျဆုံး ညီညှတျနရေော။ အသားတှတေော့ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ တကယျမပါသလောကျပါ။
ဒါပမေယျ့ အဆငျ့တနျးမွငျ့မွငျ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညီစားရတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ LOTTE လို နရောကွီးမှာမလား။ ဒီလောကျကတော့ ပေးထိုကျပါတယျ။ ပုံမှနျ တခွား Hotel Buffet တှမှောလညျး ဒီထဲက အားလုံးနီးပါးပါပမေယျ့ ဒါလေးကြ ဈေးလေးခြိုပွီး လူတိုငျးစားနိုငျတဲ့ဈေးနဲ့ အဆာပွေ ဝဝလငျလငျစားနိုငျမှာဆိုတော့ တနျတယျဆိုတာထကျ အဆငျပွတေဲ့ Buffet လို့ သုံးနှုနျးခငျြပါတယျ။
တနျလားဆို တနျပါတယျ။ အမြိုးအစား အမြားကွီး စားရမှာလားဆို စားပှဲပျေါမှာရှိတာ အကုနျပါပဲ။ လုံးဝ အမြားကွီး မဟုတျပါဘူး။ Item တှကေ မကွာခဏ ပုံမှနျအပွောငျးလဲရှိတဲ့ပုံပါပဲ။ ဂငျြးတော့မဟုတျပါဘူး။ ကွငွောထားသလောကျအကုနျပါပါတယျ။
အမြိုးတို့ရေ သှားရငျ ဓါတျဖမျးလို့လှတဲ့ ဝတျစုံလှလှလေးဝတျသှား၊ ကနျဖြားဘကျက နရောလှလှလငျးလငျးလေးမှာထိုငျ၊ ကုနျသလောကျယူစား ခနခနယူစား ပွီးရငျ Hotel ထဲဝငျ ဓါတျလှလှလေးဖမျးခဲ့နော့။ ကဲ…အခရာတော့ ကိုယျ့အစားခဈြသူတှအေတှကျ အရငျသှားစား၊ အရငျတငျပေးလိုကျပွီနျော။
သူက နတေို့ငျး တနင်ျဂနှကေလှဲပွီး နခေ့ငျး ၁၁ ခှဲကနေ ၂ ခှဲထိရှိပါတယျတဲ့။ Hotel Buffet တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ဖုနျး +9519351000 ကို ကွိုလေးတော့ ခြိတျဦးနျော။ ဒီလ ၂၈ တဈရကျတော့ ပှဲလုပျဖို့ ကွိုယူထားပွီးပွီမို့ မရလောကျတော့ပါဘူးတဲ့။ ကနျြရကျတှေ နတေို့ငျးရှိသေးတယျတဲ့နျော။ ကဲ…သှားလိုကျကွစို့ဗြား။